Mu'asasada Linux iyo Kooxda Microsoft ilaa ay ka bixiyaan Shahaadada Barnaamijka Azure | Laga soo bilaabo Linux
Linux Foundation iyo Microsoft waxay ku biiraan xoogagga si ay u bixiyaan shahaadada barnaamijka Azure
210 | | Featured, GNU / Linux, Noticias, Lagu taliyay, Shabakado / Adeeg, dhowr
Mu'asasada Linux y Microsoft waxay go'aansadeen inay ku biiraan xoogagga si ay u soo jiitaan isticmaaleyaasha barnaamijyada bilaashka ah Cloud Azure adoo bilaabaya tan cusub shahaadada taas oo ay suurtagal noqon doonto in la aqoonsado aqoonta ay leedahay teknoolojiyada Linux ku dhex jira Microsoft Azure. Waxaa la heli karaa laga bilaabo Diseembar 9, 2015 waxaana soo saari doona Microsoft sida Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) Linux oo ku saabsan shahaadada Azure. Tan waxaa badanaa loogu talagalay maamulayaasha nidaamka kuwaas oo maareeya ama raba inay maareeyaan xalalka Linux on platformka Azure.
Haddii aad rabto inaad hesho shahaadadan, waa inaad ogaataa in la siin doono kuwa ka gudbay Imtixaanka Microsoft 70-533 (Solutions Kaabayaasha Microsoft Azure) waa maxay qiimaha 150 $ iyo taas Linux Foundation Maamulaha Nidaamka Shahaadaysan (LFCSA) waa maxay qiimaha 179 $ qiyaastii. Imtixaanadani waxay u oggolaanayaan inay muujiyaan awoodda murashaxu u leeyahay qaabaynta, hirgelinta iyo dayactirka dhismaha Ccod-Linux Aqoonsiga in la helo karti looga faa'iideysan karo howlaha ballaaran iyo awoodaha Microsoft Azure.
Jim Zemlin. Agaasimaha Guud ee Linux
Faallooyin muuqda Jim Zemlin, Maamulaha Mu'asasada Linux, ayaa sheegaysa in shahaadadani ay tahay aalad cusub oo shaki la’aan u oggolaan doonta kuwa xirfadlayaasha ah ee hela inay ka dhex muuqdaan dadka la shaqeeya. Ma ahan war in jawiga maanta ee IT-gu dalbado in ka badan abid shaqaalaha, gaar ahaan kuwa mas'uulka ka ah dayactirka nidaamyada, kuwaas oo lagu qasbay inay yeeshaan awood ay ku maareeyaan deegaanno isku dhafan iyo kuwo isku dhafan, taas oo ay lagama maarmaan u tahay in la xakameeyo labada nidaam (Windows y Linux), Taasi waa sababta shahaadadani u metelayso fursado badan oo looga shaqeyn karo teknoolojiyada hadda jirta.
Waa in la ogaadaa in ka badan 25% dadka isticmaala ka socda Microsoft Azure way isticmaalaan Linux, haddaba, shahaadadan cusubi waxay ka dhigan tahay tallaabo kale oo lagu qaato Linux en Azure
Si kastaba ha noqotee, wadashaqeyntu maahan hal-abuurka kaliya ee Microsoft tan iyo markii uu dhawaan qandaraas la saxiixday kooxda ay xafiiltamaan Red Hat si ay u fuliyaan RHEL a Azure, oo muujinaya awoodda Microsoft ay u leedahay inay ku soo saarto isbeddello muhiim ah warshadaha.
Qofna qarsoodi maaha Foundation Foundation y Microsoft iyagoo ka wada shaqeynaya mashaariic badan, tartamayaashaan hore waxay ka faa'iideysteen qasaarooyinkooda iyo isku ekaanshahooda si ay u dhiirrigeliyaan isbeddello waaweyn iyo waxyaabo cusub oo ku saabsan adeegsadayaashooda, iyadoo loo marayo geeddi-socod ay lagama maarmaan u ahayd in labada dhinacba ay is cusboonaysiiyaan inay ku sii nagaadaan suuqa oo ay sii wadaan soo jiidashada isticmaaleyaasha. Markaa ka dib, waxay noqon laheyd mid xiiso leh in la arko haddii Windows wuxuu xubin ka noqdaa aasaaska.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Featured » Linux Foundation iyo Microsoft waxay ku biiraan xoogagga si ay u bixiyaan shahaadada barnaamijka Azure
Waa wax laga xumaado in la arko in bulshada Linux ay ka sii darayso xumaan; waqtiyada wanaagsan ee Linux (markii Linux ay ku lug laheyd ka mid noqoshada iska caabinta, ka mid ahaanshaha xalka ee ma ahan dhibaatada, la dagaalanka weyn iyo aflagaado) wararka sidee tahay Kaliya maahan inay noqdaan wax aan macquul aheyn laakiin dhab ahaantii, gebi ahaanba lid ku ah, laakiin maya, maanta wararka sidan oo kale ah waxay ku farxaan kuwa hadda Linux isticmaalaya
Waan ka xumahay iyaga.
Waan la wadaagayaa walaacaaga, laakiin kuma raacsani gebi ahaanba.
Linux muddo dheer ayey la dagaallameysay wiilasha waaweyn, laakiin warkan wuxuu ku saabsan yahay guul, oo aan la is dhiibin. In shirkad caan ku ah ganacsigeeda barnaamijka softiweer ahaan, in si hermetically ah loogu shaabadeeyo horumarinteeda iyo faa iido dhaqaale oo muuqata, waxay u aragtaa baahida loo qabo in Linux lagu soo bandhigo barnaamijkeeda inay tahay guul muuqata.
Haddii Microsoft aysan aqbalin Linux adeeggeeda Azure, waxay si cad u lumin doontaa suuqa Computing Cloud ee adeegyo sida AWS, Google Cloud, ama Oracle Cloud. Waxay bixiyaan taageero hooyo oo loogu talagalay Linux.
In Windows ay u baahan tahay inay la noolaato Linux waa cadeyn cad in inkasta oo dadaallada oo dhan, dhaqaalaha iyo hantida aqooneed, Microsoft aysan awoodin inay hoos u dhigto GNU / Linux Community.
Heerka kombiyuutarada shaqsiyadeed, xaqiiqadu way ka duwan tahay, waxaan aragnaa joogitaan ballaaran oo Windows ah, horumariyayaal badan (aniga oo aan ku jiro) waxay arkeen baahida loo qabo in Windows-ka loo kaydiyo si loo helo xalka macaamiisha. Laakiin marka ay timaado xisaabinta waxqabadka sare, xalalka shirkadaha, iyo nidaamyada loo qaybiyo, Linux ayaa hubaal horay u socota.
In dadka intiisa badani aysan aqoonsanayn Linux (oo xitaa aysan awood u lahayn inay kala soocaan Windows-ka) ma ahan guul darro, waa tallaabada xigta! Linux-kan wuxuu u tartami karaa isticmaaleyaasha iyada oo aan lahayn khibrad xisaabeed shaqsiyeed!
Dagaal, qofna uguma yeedhi doono guuldarro inuu ku soo duulo dhulka cadowga iyo inuu arko baahida loo qabo in lala kaashado!
Salaan iyo mahadsanid wax ku biirintaada!
Waxay noqon laheyd hadii runtii dhulkii lagu soo duulay uu ahaan lahaa kan intiisa kale, laakiin waa "Linux" iyo bulshadeeda oo dhulkooda lagu soo duulay waqti dheer iyo in ka badan. Faalladayda kale qodobkani wuu yara cad yahay.
Haddii maanta qof kastaa wada cuno Linux, ma aha sababta oo ah kuwa kale ayaa miisas beddelay, laakiin maxaa yeelay imminka Linux ayaa fadhiya miiska kuwa kale. Linux hadda waa "nidaamka."
Linux hadda waa hal aalad kale oo ku jirta aaladdaada. Ma jiraan wax guul ah marka laga reebo kuwa doonaya inay qiyaasaan, waa jab kale.
Kuwa sunta Linux sameeya ayaa i dhaawacay. "
Markii aan akhrinayo faallooyinka noocaas ah ee leh dhammaadka *******, ma caawin karo laakiin waxaan u maleynayaa in fikirkaagu ka yimid xagjirnimo ee uusan ka imaanayn khibrad shaqo.
Linux waa aalad ay inbadan oo naga mid ah oo halkaan wax ka faallooda ay nolol ka sameysteen. Fursadaha wanaagsan waxay ka dhigan yihiin nolol tayo fiican leh.
Runtii ma aqaano sababta aan kuugu jawaabayo. Dadka xagjirka ah ee fikradahooda ku saleeya xagjirnimada, oo aan ka go'nayn xaqiiqda ay dadka kale ku noolyihiin, ayaanay awood u lahayn inay sababeeyaan doodaha dadka kale.
Ku jawaab Roberto Flores
Maamulaha nidaamyada aan awoodin inuu isticmaalo mid ama nidaamyada kale; markaa ma tihid maamule system. Shirkaddayda waxaan ka isticmaalnaa daaqadaha meesha aan ka adeegsaneyno Linux server, wax walbana waa cajiib, marka lagu daro Azure waxaa loo adeegsadaa horumarinta barnaamijka isbadalkan ayaa sifiican noogu habboonaan doona.
Taasi waxay dhacdaa iyadoo lagu jahwareeriyo GNU iyo Linux, oo labadaba loogu yeero "Linux". GNU isma bedelin, gadaalna ugama laaban waxayna ahaataa sidii ay ahayd 30 sano ka hor. Linux waa sheeko kale: kuwa yaryari wey weynaadeen (RedHat), waxaana jiray dad waaweyn oo kusoo biiray (Intel, Google, Microsoft, iwm). Laba aragti oo kala duwan, laakiin taasi way wada noolaan kartaa.
Ku jawaab johny
Ahaanshaha Linuxero maanta waa nooc ka mid ah dagaal-diimeed diimeed halka waxa muhiimka ah ay tahay inaad xukuntid shayga cibaadada (Linux), qiimo kasta iyo gorgortanka mabda 'kasta.
Marka waxaad arkeysaa iyaga oo taageeraya taageerada DRM haddii taasi ka caawineyso Linux guuleysiga, kuna faraxsan xisaabinta sii kordheysa ee diirada saareysa Clouds halkaas oo shirkadaha iyo dowladaha ay ka xakameynayaan annaga sida aan u sameyno sababtoo ah waxay isticmaalayaan Linux, aqbalayaan oo qiil u sameynayaan nidaam Kernel sii kordheysa oo loo yaqaan 'trojanized kernel' oo leh ilo xiran, sanamaynta iyo si qarsoodi ah u difaacaya shirkad gaar ah oo ku nool adware, basaasid iyo kormeer qof walba sababtoo ah waxay isticmaashaa Linux si ay sidaas u sameyso, dhiirrigelinta dukaamada ilo-xiran si ay ugu dambeyntii u yeeshaan ciyaaro yar iyo codsiyada Linux horeyba. Konsollo kuwaas oo gebi ahaanba lumiya lacag iyo qalabba; maaha in la xuso beenta dhaqameed iyo runta nuska had iyo jeer loo isticmaalo raaligelinta Linux. Waxaas oo dhan kaliya si loo helo rajo aan caddeyn oo ka caawin doonta Linux guuleysiga.
Waa dan sida haddii ay saami ku leeyihiin Linux ama ka xun, sida haddii guushii Linux ay noqotay macnaha noloshooda. Haddii Linux guuleysto way guuleysan doonaan. Haddii Linux ay guuleysato noloshooda sidoo kale. Sida cibaadada.
Linux wuxuu ka soo noqday macne ahaan noqoshada dhamaadka.
Kahor xushmad badan ayaan u hayey dhaqdhaqaaqyadan, laakiin hadda waxaa cadaatey in waxa ay raadinayeen ay ahayd in la fuulo (sida qof walba rabo) laakiin la ciyaarayo doorka badbaadiyeyaasha oo ka duwan (sida inbadan ay sameeyaan).
Malahayga adiga iyo aniga hada waxaan kujirnaa liiska qishka. Ama si ka sii daran, oo ku jira liiska "xamaasadda leh", maxaa yeelay hadda markaad aragto iswaafaqla'aantaada oo aadan indho sarcaad dhigin waa "inaad tahay xamaasadda."
Ma aqaano haddii faaladan la daabacayo maxaa yeelay waxaan arkaa in hadda boggan faallooyinka marka hore meel ku dhacayaan.
gebi ahaanba oggol
Ku jawaab abaddon
Mid ahaan maamule ahaan waa war wanaagsan, marka Hyper-v la hagaajiyo maalin kasta si loogu isticmaalo GNU / Linux OS si raaxo leh, waa raaxo. Wanaagsan Linux kaas oo ku guuleysta tartan lala galo shirkadaha gaarka loo leeyahay. waxay u fiican tahay microsoft ka fikiraya furitaanka wax yar oo ka mid ah alaabteeda.
Waxay ila tahay aniga isbahaysigani inay yihiin kuwa ugufiican, dagaalka udhaxeeya shirkadaha waa naga dambeeya tanina mustaqbalka fog faaiido badan ayey uleedahay kuwa naga mid ah ee isticmaala GNU / Linux (taageero fiican barnaamijyada tusaale ahaan)
Waxaan ku qiimeeyaa faallooyinka pedrini210 mid aad u fiican.
Taleefanka gacanta ee Polaroid wuxuu joojiyay shaqadiisii, wuxuu dhahay waxba barnaamij maleh, sidee baan uga dhigi karaa inuu markale shaqeeyo, mahadsanid, jawaabo ayaan sugayaa
Ku jawaab jose juan herrera
isticmaal triskel ama parabola iyo voila waxaad leedahay software bilaash ah iyo waliba 100% kernel bilaash ah sidoo kale
Deegaanka qorfaha 2.8 hadda waa la heli karaa!